Iziphehlamandla ezintsha zikagesi zingalekelela kokuningi - Bayede News
ISIKHONDLAKHONDLA senkampani ephehla ugesi kuleli i-Eskom sesifinyelele lapho sesizokwazi ukuncintisana nezinye iziphehlamandla zikagesi ezibizwa ngokuthi ama-Independent Power Producers (IPP’s). Lezi ziphehlamandla zihambisana nenqubo kaHulumeni yokulawula ukugovuzwa kwamandla kagesi angenaso isici emvelweni. Futhi kulindeleke ukuthi ziphehle amaphesenti angama-30, ukuze u-Eskom yena ehlele kumaphesenti angama-70.
Kuzokhumbuleka ukuthi ucwaningo lososayensi luveza ukuthi, nxashana kuphehlwa ugesi ngendlela yokusebenzisa amalahle, kubanezici eziningi emvelweni kanjalo nakubantu. Emvelweni, kutholakala ukuthi ungwengwezi lomkhathi, olubizwa nge-ozone layer, seluncunzekile ngale ndlela yokuthi selugcina ludedela imisebe yelanga engalungile futhi enobungozi okuyiyona egcina ilethela abantu izifo eziningi okubalwa kuzo nomdlavuza wesikhumba.
Nxa kuza emathunjini omhlaba lapho kusuke kumbiwa khona amalahle, kuyatholakala ukuthi nakhona kugcina kudala ukuthikaziseka okugcina kudala ukuzamazama komhlaba okungenasidingo. Kugcina kubhidlika nomhlabathi okwenzeka emuva kwesikhathi kwaqedwa ukumbiwa ngenxa yokungabi nakusekeleka komhlabathi osuke usumbiwe emathunjini omhlaba.
Okubuye kuphawuleke futhi ukuthi isikalo samalahle asasilele eNingizimu Afrika alinganiselwa kuphela eminyakeni elikhulu esekhona, emuva kwalokho kubikwa ukuthi ayoba esephelile. Lokhu kukodwa kukhombisa ukuthi abantu abaphila manje bazoba nomthelela emvelweni nasezizukulwaneni eziyolandela ngisho ngabe bona sebekade balala kwamhlaba.
Kanjalo nakwezezimali, kuyatholakala futhi ukuthi sekungase kubize kakhulu ukumba amagugu afana namalahle kwazise phela aya ngokuya etholakala ezinzulwini zomhlaba.
Ngenxa yalokhu nezinye izizathu, amazwe omhlaba ayaba elokhu eba nenzingxoxo minyaka yonke ukuze abhekisise isimo somhlaba uma kuya ngokunakekela imvelo. Lokhu kugcina kulethe imibono emisha nobuchule obuthi akube nezinye izindlela ezingajwayelekile ezizokwazi ukuthi mazisetshenziswe ukuze ziguqule kancane kancane indlela okumele abantu mabasebenze ngayo ukuvikela nokunakekela umhlaba okumele masiwushiyele izizukulwane ezizayo.
Ingqungquthela yeshumi yeBRICS inomthelela emnothweni wakuleli
Njengoba sazi ukuthi kwephezulu, sekube nokushicilelwa kwesivumelwano esizoletha uguquko eNingingizmu Afrika maqondana nokuphehlwa kukagesi, ngazo belu izindlela ezizoletha ukuvikeleka nokunakekeleka kwemvelo njengoba sesishilo ngenhla. Ongungqongqoshe omusha kwezamandla nokumbiwa phansi, uMnu uJeff Hadebe ushicilele lesi sivumelwano esisha nezinkaphani ezingama-27. Lezi zinkaphani yizo ezinikezwe amandla manje okuthi mazithole izimvume zokuqhiqiza ugesi zisebenzisa izinto ezifana nelanga, imfucuza, amandla omoya ezindaweni lapho kutholakala khona umoya omningi. Lokhu kuyisinyathelo esibalulekile eNingizimu Afrika njengalokhu sazi ukuthi kuhambisana nezigaba eziningana iNingizimu Afrika ezibophezele kuzo njengeNational Development Plan, iParis Accord, iKyoto Protocol nezinye. Lapha iNingizimu Afrika yasayinda ukuthi izoletha uguquko olunzulu ekutheni umnotho wayo ungasekeleki kuphela ezintweni ezifana namalahle ekukhiqizweni kukagesi. Lolu hlelo lwama-IPP olusayindwe yizinkaphani ezingama-27, luzodla izizumbulu ezilinganiselwa ezigidigidini ezingama-R55.92. Okanti futhi luzokwazi ukudala amathuba emisebenzi alinganiselwa ezinkulungwaneni ezingama-58. Nokho kusenongabazane ikakhulu kwabezinyunyana ukuthi lolu hlelo luzodicilela phansi imisebenzi eminingi yabantu abasebenza ezimayini kanye nasenhlanganweni elawulwa uHulumeni u-Eskom.
Okushiwo uNgqongqoshe uHadebe nxashana kukhulunywa ngokuzibandakanya kwaboHlanga kulolu hlelo ukuthi okuphethwe yibo kulinganiselwa kumaphesenti angaphezu kwangama-60. Indida kube ukuthi ngesikhathi sokusayinda, bekubonakala bebaningi abebala elimhlophe kunaboHlanga.
Nokho amathuba asazoba maningi kuyaphambili kulo mkhakha wezokuphehlwa kukagesi kwazise yiwona mgogodla womnotho emhlabeni jikelele, futhi iNingizimu Afrika yiyona ephinde ithwale amanye amazwe asezansi ne-Afrika ekuwaphakeleni ngawo ugesi lona.
UMnu uGugulethu Xaba ungumsunguli we-Adamopix, onothando olunzulu lwezindaba eziphathelene nentuthuko yezezenhlalo nomnotho. Uyilungu leBhodi lenkampani eklelisiwe kuJSE iCorwil Ltd.
Bayede News Dec 15, 2019